Volom-bary, Fanamafisana ny fitiliana amin'ny alàlan'ny rivotra, Solvable fluorinated ho an'ny mpanamboatra mpanamboatra sy mpamatsy any Shina
Description:Rano mangatsiaka,Fitetezana ny fanaraha-maso ny temperature,Solvent Fluorinated For Inverter,Kilaometatra ho an'ny mpanova,,
Home > Products > Fiarovana amin&#39;ny fluoro-karbônina > Kilaometatra ho an&#39;ny mpanova
Ny vokatra avy amin'ny Kilaometatra ho an'ny mpanova , mpanofana manokana avy any Shina, Rano mangatsiaka , Fitetezana ny fanaraha-maso ny temperature mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Solvent Fluorinated For Inverter R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Fiarovana avo lenta ny dielectric ho an'ny angovo mpanova  Contact Now
Solon-drivotra maivana amin'ny angovo azo avadika  Contact Now
Fitaovam-pitaterana ranon-tsavoka ho an'ny mpampifana  Contact Now
Toxicity tsy misy toaka  Contact Now
TUWF-47 dielectric Coating for inverter  Contact Now
Mametaka ny vovo-drivotra mafana amin'ny mpanofana  Contact Now
Fiarovana ara-tsakafo azo antoka ho an'ny mpampita  Contact Now
Fiarovana amin'ny alàlan'ny temperature ho an'ny mpampita  Contact Now
Kofehy ho an'ny Power of High Speed ​​Train  Contact Now
Fiarovana avo lenta ho an'ny fiovan'ny rivotra madagasikara  Contact Now
Fiarovana avo lenta ny dielectric ho an'ny angovo mpanova Ny fiarandalamby haingam-pandeha dia manana fepetra takiana amin'ny fahandroana. Ho an'ny hafainganam-pandeha maherin'ny 300 km / h. Izy ireo dia manome ny fahamendrehana...
Solon-drivotra maivana amin'ny angovo azo avadika Anarana simika: Perfluorohexene Ho an'ny hafainganam-pandeha maherin'ny 300 km / h. Izy ireo dia manome ny fahamendrehana fara-tampony, afaka sy mangina izy io. Mandeha haingana...
Fitaovam-pitaterana ranon-tsavoka ho an'ny mpampifana Anarana simika: Perfluorohexene Ny EMU dia aterina amin'ny tsipika elektrika avy amin'ny tambajotra mifandraika mba hahazoana angovo tokana tokana monja 25 kV AC, izay alefa any anaty...
Toxicity tsy misy toaka Anarana simika: Perfluorohexene Ireo singa ao amin'ny mpampita vaovao dia manana ny mari-pana amin'ny serivisy nomeny. Raha toa ka tsy mahomby ny fampivoarana ny hafanan'ny hafanana, raha mbola miasa ny...
TUWF-47 dielectric Coating for inverter Anarana simika: Perfluorohexene Ny fiaran-dalamby haingam-pandeha koa dia mametraka fepetra takiana amin'ny rafitra fantsona. Ho an'ny hafainganam-pandeha maherin'ny 300 km / h. Izy ireo dia manome...
Mametaka ny vovo-drivotra mafana amin'ny mpanofana Anarana simika: Perfluorohexene Ny foto-kevitry ny famotehana hafanana ny mpanova ny fifandraisana dia mitovy amin'ny an'ny kapila tokana. Afaka mandefitra haingana ny hafanana avy...
Fiarovana ara-tsakafo azo antoka ho an'ny mpampita Ny fiaran-dalamby haingam-pandeha koa dia mametraka fepetra takiana amin'ny rafitra fantsona. Ho an'ny hafainganam-pandeha maherin'ny 300 km / h. Izy ireo dia manome ny...
Fiarovana amin'ny alàlan'ny temperature ho an'ny mpampita Anarana simika: Perfluorohexene Ny singa ao amin'ny mpampita vaovao dia manana mari-drivotra miasa. Raha toa ka mahantra ny fahombiazan'ny fampiasana hafanana ny mpampita...
Kofehy ho an'ny Power of High Speed ​​Train Anarana simika: Perfluorohexene Fluorocarbon hihena antonony andian-dahatsoratra dia Perfluorinated rano akora, izay manana dielectric avo. I T C ooling ny hafanana-niteraka ny fiaran-dalamby...
Fiarovana avo lenta ho an'ny fiovan'ny rivotra madagasikara Mba hampihenana ny haavo sy ny haingam-pandeha kokoa ny singa sy ny fiantohana ny fiainana andavanandro, Ny famolavolana ny tranom-patany sy ny sifotra hafanana dia mifamatotra...
Shina Kilaometatra ho an'ny mpanova mpamatsy
Amin'ny fampitaovana mandeha amin'ny herinaratra, ny fiakaran'ny hafanam-be vokatry ny sambo lehibe, ny transformer, ny transistors moss sy ny fitaovana hafa dia mitarika amin'ny fiakaran'ny hafanan'ny rafitra. Mba hisorohana ny hafanana miasa mafy dia tsy maintsy dinihina ny vahaolana amin'ny famoahana hafanana. Ny vahaolana dia ahitana ny fivoahana ny hafanana (miaraka amin'ny radiatora), ny famelana ny hafanana amin'ny hafanam-panafody (amin'ny rongony varahina), ny famelana ny hafanana mafana (miaraka amin'ny fanaka), ny fivoahan'ny hafanana hafanana (amin'ny ranom-boankazo). Raha manana ny fepetra momba ny fandevenana ny hafanana mangatsiaka ianao , azafady mba mifandraisa aminay.
Rano mangatsiaka Fitetezana ny fanaraha-maso ny temperature Solvent Fluorinated For Inverter Kilaometatra ho an'ny mpanova Rano mangatsiaka Vs